Waqtiga saanbareenka: Nooc cusub oo beta ah 4.0 si looga daawado filimada iyo taxanaha khadka tooska ah | Laga soo bilaabo Linux
Time Popcorn: Nooc cusub oo 4.0 ah si looga daawado filimada iyo taxanaha khadka tooska ah
Kuwaas oo kale waqtiyada go'doominta bulshada adduunka (fogeyn, karantiil), inbadan oo naga mid ah oo xiriir internet leh, ayaa lagu qasbay ka faa'iideyso waqtiga daalacashadaHadday tahay akhris, qoraal, baloog garayn, ama uun daawashada casharro, qaadashada koorsooyin, ciyaar ciyaar, ama daawashada qaar ka mid ah waxyaabaha ku jira qoraallada badan ee internetka.
Oo si hufan loogu talagalay kan dambe, abuurayaasha Time Popcorn ayaa dhawaan bilaabay a nooca beta cusub, 4.0, ee cajiibka ah barnaamijka isha furan.
Haa, Waqtiga saloolda! Codsigu wali wuu shaqeynayaa waana la cusbooneysiiyay si uu noo oggolaado inaan sii wadno isticmaalkaaga cajiibka ah madal oo hawlgalkiisu salka ku hayo maamuuska bittorrent. Time Popcorn waa tusaale wanaagsan oo ah sida Barnaamijka bilaashka ah Aniga Meel furan si fudud, si hufan oo xarrago leh u isticmaali kara tiknoolajiyadda la heli karo si ay u bixiso xalal wax ku ool ah oo loogu talagalay dad badan, qiimo jaban ama eber. Inkasta oo qaarkood, Time Popcorn Waa nooc ka mid ah beddelka dhabta ah, in kasta oo aanu sharci ahayn ama aan loo idmanayn, si loo sii daayo barnaamijyada sida Netflix, tusaale ahaan.
En Laga soo bilaabo Linux Maaha markii ugu horeysay ee aan ka hadalno Time Popcorn. Qoraalkeenii ugu dambeeyay ee ku saabsan wuxuu ahaa wicitaan «Talooyin lagu rakibo Waqtiga saanbaaraha, Spotify iyo Telegram on DEBIAN», taas oo aan ku sifeyno Time Popcorn sida:
"Waqtiga Popcorn: Waa codsi soo gudbiya (soo-saaraya) soona dejinaya filimaan, barnaamijyo telefishano (taxane ah) iyo Animes (Comics-ka Japan) khadka tooska ah (iyadoo loo marayo internetka) faylasha durdurrada leh Isticmaalkeedu waa mid aad u fudud, waa la soo dejiyey, waa la jajabiyay, waa la fuliyay, filin ama dhacdo ayaa la xushay, tayada taranka iyo cinwaanada ku habboon ayaa la xushay, ugu dambeyn guji ciyaarta oo ku raaxeyso".
Sidaas darteed, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso hadhow, dhaqan guud oo saafi ah.
1 Time Popcorn
Hadda, Time Popcorn leeyahay a nooca deggan (3.0) oo hadda wuxuu leeyahay a nooca beta cusub (4.0), kaas oo ku dhex jira wararka qaarkood, mid taagan, oo ah ogaysiiskaaga kuweenna Cinwaanka IP yahay ama jiri karaa dhul-jog ah iyo dabagal (kormeer) by our ISP ama Dowlad, dhammaan wixii ka sarreeya, nooca nuxurka la cunay. Dhexdeeda, wuxuu nagu casuumay inaan isticmaalno a Shabakadda VPN si loo ilaaliyo qarsoodigayaga iyo / ama asturnaanta, ugu yaraan, marka la isticmaalayo Time Popcorn.
Haddii kale, nooca cusubi wuxuu u shaqeeyaa sida saxda ah kuwii hore, taasi waa, wuu adeegsadaa interface dareen leh oo saaxiibtinimo, taasi waa, cad oo fudud, tan iyo waxay tusaysaa waxyaalaha isbeddelaya (la muujiyay), marka loo eego, oo noo ogolaaneysa inaan ka raadinno waxyaabaha ku jira miirayaasha lagu diyaariyo dusha sare, oo loo kala sooco qaybo. Waxay kuxirantahay tayada iyo baaxada isticmaale kasta, waxay la kulmi karaan ku dhowaad deg deg ah oo loo maqli karo wax walboo la daawado.
Nooca: Filimaan, taxane iyo anime.
Kala sooc: Waxyaabaha la arkay, Cinwaanka, sanadka, iyo qiimeynta.
Soo degsashadiisa iyo isticmaalkeedu waa wax aad u fudud, waa inaan tagnaa oo keliya Websaydh rasmi ah oo Popcorn ah, Feeji, ka sameysid toobiye meenka weyn oo orod si aad u bilowdo fiiri waxyaabahayaga fara badan ee internetka doorbiday ama la rabay.
Ugu dambeyntii, waxaa xusid mudan in, Time Popcorn waa codsi inta jiritaankiisa ama taariikhdiisu soo bandhigtay dhibaatooyin badan, oo labadaba ay sharci ka yihiin waxyaabaha la soo bandhigo ee ku xadgudbaya xuquuqda lahaanshaha shirkadaha soo saara iyaga, iyo sidoo kale tartanka loogu talagalay loolanka u dhexeeya kooxaha horumarka ee codsiyada la midka ah (fargeeto).
Marka hadda Time Popcorn, waa mid firfircoon oo la cusboonaysiiyay, laakiin ma ogin illaa inta uu le'eg yahay. Sidaa darteed, waxaa habboon in la isticmaalo oo lagu raaxeysto waqtiyadan cidlada ah ee guriga, taas oo aan u heli doonno natiijada ka dhalatay Cudurka caalamiga ah covid-19.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan codsiga cajiibka ah ee loo yaqaan magaca «Popcorn Time» abuuray si dad badan oo isticmaala internetka jecel filimo, taxane TV iyo anime, ka heli karaa oo arki karaa waxyaabaha la sheegay iyada oo loo marayo a madal ku saleysan hab maamuuska bittorrent, noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Time Popcorn: Nooc cusub oo beta ah 4.0 si looga daawado filimada iyo taxanaha khadka tooska ah
Nooca Fedora 32 beta horay ayaa loo sii daayay oo kuwani waa isbeddelladooda